Miangatra ho an'ny steroid potika ve ianao izay nahazo ny fitokisan'ny mpitsabo? Eny ary, methyltestosterone tokony ho safidinao manaraka. Fantaro ny tombotsoa azo amin'ny fampiasana ity rongony ity, ny tantarany amin'ny fitondran'ny taovam-pandevonan-tena sy ny sehatry ny fitsaboana, ny vokatra hafa, ary ny fomba hividianana ny doka.
Ny bodybuilding dia tsy resaka mandeha amin'ny toeram-pandihizana ao an-toerana ary manao fanatanjahan-tena lehibe. Mila manao mihoatra noho ny fivoahana ianao. Na izany na tsy izany, mety ho very ny psyche sy ny antony manosika anao eny an-dalana, indrindra rehefa tsy ho hita ny valiny.
Ny bodybuilder tsirairay dia miandrandra fatratra amin'ny karazana kibay amin'ny tongotra marevaka tsara. Raha miala amin'ny fifaninanana ianao, dia hiantehitra ny herisetra, ny tanjaka ary ny herinao. Amin'ny tena dikany, ireo firenena ireo dia fototry ny fahombiazanao. Trenbolone Enanthate vs Trenbolone Acetate (iza no mahazo?)
Nanao ahoana ianao? Tohizo izany satria be dia be ianao. Na dia manana tanjona samihafa aza isika, dia tiantsika rehetra izany fiaretana mahagaga izany mba hiatrehana ny mpanohitra antsika. Amin'io tranga io, dia tsy mahasosotra mihitsy ny manandrana steroid toy ny methyltestosterone. Ho tombontsoan'ny fampitomboana ny herisetran'ny mpampiasa, ity zava-mahadomelina ity dia mihoatra ny mpifaninana rehetra.
Alohan'ny handraisana methyltestosterone dia ataovy izay hahafantarana ity lahatsoratra ity.
1.Inona ny Methyltestosterone? Ahoana no iasany?
Methyltestosterone dia anisan'ireo antokon'olom-bolo amidy amabolika antibiotika anabolika ho an'ny taova. Kitapo simika tsy misy CAS izy io 58-18-4. Ny vokatra dia fanafody nomerika ho an'ny mpanao fampirantiana biriky satria mampiseho androgenic sy anabolic.
Methyltestosterone dia fanoloran-tena ho an'ny mpisava lalana, izay avy amin'ny testosterone. Ny mampiavaka ny fitambarana dia ny fampidirana ny molekiola C17-alpha alkyl. Raha ny siansa, ny fanampin'ny vondrona methyl iray dia miantoka fa ny fanafody dia afaka miaina amin'ny alàlan'ny fanodikodinam-pahefana sy ny fitsaboana ao amin'ny vatana.
Ao amin'ny Methyltestosterone dia mifototra amin'ny 17 ny methyl groupth toerana misy ny atôma karbôna. Ity lafiny ity dia mahatonga ny fitambarana ho latsaka ao amin'ny kilasy misy steroids alpha-alkylated C-17. Na izany aza, ho an'ny Methyltestosterone bodybuilding, ny toetra anabolika dia tsy mahagaga toy ny amin'ny hafa C-17-aa.
Ny vokatra androgenic sy anabolic vokatra dia manodidina ny 100 ho an'ny sokajy tsirairay. Ity 1: 1 io dia mifanaraka amin'ny an'ny testosterone.
Na dia mamoaka bodybuilder amin'ny mozika tsara sy mozika tsara aza io testosterina voalohany io, dia ampiasaina eran-tany ny fampiasana azy. Ohatra, ny Methyltestosterone, pharma, dia manam-pahaizana momba ny fitsaboana amin'ny homamiadana, ny fitsaboana ny menopause, ary ny fitantanana ny osteoporose.
Ny fisian'ny methyltestosterone dia miverina amin'ny 1935. Ny steroid dia namela tany vaovao ho an'ny fampiasana andrena am-bava, tsy amin'ny fampiharana ara-pitsaboana, fa ao amin'ny sehatry ny fanabeazana ihany koa. Ny antony voalohany amin'ny fampivoarana ny zava-mahadomelina dia ny fanoloana ny testosterone voajanahary amin'ny lahy raha toa ka ambany noho ny mahazatra ny halavan'ny endogno.
Na dia Methyltestosterone for sale dia azo jerena tahaka ny steroid ny vatana, ny Ciba Pharmaceuticals dia nitondra takelaka baka izay mety hamongorana mivantana amin'ny alalan'ny lela. Ireo zava-mahadomelina ireo dia fahasorenana eo amin'ireo 1950 sy 1990s miaraka amin'ny marika, Metandren Linguets.
Raha tokony hitelina ny pilina Methyltestosterone, dia azonao atao ny mametraka ny takelaka Metandren Linguets eo ambanin'ny lela ary mamela azy ireo hamongotra. Rehefa miondrika, dia mivezivezy amin'ny tsindrona mucosa ny steroid raha tsy manadino ny aty.
Tahaka ny an'ny steroide hafa rehetra, ny fampiasana an'io zava-mahadomelina io dia mbola miteraka resabe. Ao anatin'izany tantara madio izany, ny ankamaroan'ny firenena dia voarara sy voasivana Methyltestosterone mpamatsy avy amin'ny tsenan'ny rongony. Raiso, ohatra, amin'ny faran'ny 80s; ny Fikambanana Afrikana Afrikana dia nanakana ny fivarotana ny Methyltestosterone avy amin'ny famokarana alemana.
Taorian'izay, ny ankamaroan'ny firenena eoropeanina dia nanenjika sy nandrara azy noho ny mety ho fiantraikan'ny Methyltestosterone, toy ny hepatotoxicity. Any amin'ny firenena amerikana, ny zava-mahadomelina dia azo atao ho an'ny tanjona ara-pitsaboana sy ara-pitsaboana. Na izany aza, sarotra be ny mahita azy io ho toy ny fanoloran-tena tokana satria ny mpanamboatra methyltestosterone dia mampifandray azy hatrany hatrany miaraka amin'ny zavatra hafa.
Ao Etazonia, ny fitsaboana dia tsy manan-kery araka ny fitsipika marina. Ny fikambanana ara-panatanjahantena lehibe indrindra ao anatin'izany ny Komity Olaimpika Iraisam-pirenena dia nanosika ny fampiasana methyltestosterone amin'ny fanatanjahan-tena. Tahiry Tovana III sy IV ao Etazonia sy Kanada izany.
Ahoana no miasa Methyltestosterone?
Ny maha-steroid ny alkaloida dia mamehy ny mpanaraka ny androgen (AR) ny Methyltestosterone. Izy dia miasa toy ny substra ho an'ny 5α-reductase enzyme, noho izany, manova ho 17α-methyl-dihydrotestosterone (mestanolone). Rehefa avy mifandray amin'ny sela AR dia manainga ny famaritana ny fototarazo sy ny androgen, izay tompon'andraikitra amin'ny fitomboan'ny isan'ny lahy sy vavy.
Tsy toy ny an'ny derivarin'ny testosterone, ny fitsapana methyl dia misy fihenana ambany kokoa amin'ny asa anabolika. Noho izany, ny ratio amin'ny anabolika sy ny androgenic dia somary kely kokoa, ka mahatonga ny steroid hanana toetra ambony kokoa androgenic.
Ny tsy fitoviana amin'ny endri-tsain'ny methyltestosterone body-building steroid dia ny fofom-piravahana mandritra ny fepetra hetsika ao amin'ny vatana. Ny aromatisa ho an'ny 17α-methyl estradiol mahery vaika dia miteraka ny fatran'ny estrogenic sy ny vokatra hafa avy amin'ny estrogenic toy ny fihazonana ny rano sy ny gynecomastia.
Methyltestosterone Formula Formula
Product anarana Methyltestosterone
Anarana simika · 17α-methylandrost-4-en-17β-ol-3-iray
Teboka (° C) 161 - 166
Toro-tavy voamaina (° C) 383
Storage mari-pana Tehirizina amin'ny hafanan'ny efitra (2 ° C - 20 ° C), lavitra ny hafanana, ny fahamendrehana, na ny hazavana
Bika Aman 'endrika Vovon-tsakafo maina tsy misy alkaola
Molecular weight 302.46 g / mol
Solubility · Ny rano riziny dia 34 g / mol amin'ny 25 ° C
· Malemy be loatra amin'ny menaka voajanahary
Klioban'ny dokotera Anabolic-androgenic steroid
Usage Manamafy ny vatana sy mampitombo ny angovo angovo
Andriamatoa Tononkalo 95 - 130
Lalan'ny Methyltestosterone Administration
Misy fomba telo ampiasaina ny methyltestosterone. Koa satria misy amin'ny takelaka takelaka, ny fomba mahazatra dia marefo. Azonao atao ny manindrona ny pilina na mametraka izany eo ambanin'ilay lela na eo anelanelan'ny valanorano sy ny nifiny ho an'ny fitondram-panjakana sy ny bcc. Amin'ity tranga ity, dia hiparitaka ny rongony raha tsy mivezivezy ao anaty taratasy mivalona amin'ny gastrointestinal.
Alao indray ny steroid indray mandeha isan'andro mandritra ny telo herinandro amin'ny fotoana mitovy. Ataovy azo antoka tsara, ataovy izay hampiasana izany amin'ny vavony tsy misy ilana azy mba hampitombo ny fahafoizam-bokatra. Ny fitrandrahana methyl amin'ny sakafo dia mahatonga azy handrodana amin'ny tavy tsy voatsabo, noho izany, mampihena ny fanamafisana ny rà.
The Methyltestosterone dosage . Ohatra, ny lehilahy dia hanana ny lanjany avo indrindra amin'ny tahan'ny dosie noho ny vehivavy. Ny fizotran'ny fitantanan-draharaha koa dia hamaritra ny habetsaky ny steroid ho mpandidy iray. Raha tianao ny takelaka baskety, dia ho kely kokoa ny doka noho ny hery ambony.
Ho an'ny fampandrosoana ara-batana, dia arakaraky ny 10mg sy 50 mg isan'andro mandritra ny herinandro 8. Na izany aza, ny marary mifandray amin'ny tsy fahasalamana androgen dia afaka mampiasa ny fanafody raha toa ka tsy dia miova loatra ny vokany. Ny zavatra rehetra tokony ho fantatra momba Anavar (Oxandrolone) ho an'ny bodybuilding
Raha ny tanjonao no manatsara ny fahaizanao, dia tsy ho anao ny methyltestosterone. Avelao aho hanazava. Misy fiantraikany goavana amin'ny androgenic, izay mety tsy hivoatra tsara amin'ny balan'ny vehivavy hormonina. Noho izany, tsy voatery mitaky ny fiantraikany ny virilisma.
Tsara raha ampiasain'ny vehivavy ny steroid raha tsy amin'ny dokotera dokotera fotsiny. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny doses ambany as 3mg dia hitantana ny soritr'aretin'ny menopause. Na izany aza, isan'andro methyltestosterone dosage dia afaka miakatra amin'ny 200mg rehefa misahana karzinôma tsy mety tapaka.
Alohan'ny handraisana ny methyl test dia ataovy izay hamakiana ny lisitry ny ordinatera. Ity fampahalalana ity dia hanome anao ny fampiasana ny zava-mahadomelina, ny fitandremana azo antoka, ary ny zavatra azo andrasana rehefa eo amin'ny doka.
Fanandramana iray hafa manamarika izany dia tokony ho azo antoka ny hitantana ny methyltestosterone ao anatin'ny fotoana fohy. Raha sendra tsy mahazo fanafana isan'andro ianao dia raiso izany raha vantany vao mamely anao ny eritreritra. Raha toa ka efa lasa ny fotoana lasa, tsidiho ilay olona tsy hita ary mitohy amin'ny ordinateranao mahazatra.
Izany zava-mahadomelina izany dia manan-kery ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy. Na izany aza, tokony hampiasa ny dosage ambany indrindra araka izay azo atao ny vehivavy.
Mety hifaneraserana amin'ny ankamaroan'ny zava-mahadomelina, ny sakafo fanampiny, ny fanafody ary ny fanafody tsy voatsabo. Ny lisitra dia misy ny fepetra diabetika, ny latsa-drà toy ny warfarin, ary ny oxyphenbutazone.
Ny renim-pianakaviana bevohoka sy ny misotro mangatsiaka dia tsy tokony handray methyltestosterone. Na dia bevohoka ianao raha mbola eo amin'ny zava-mahadomelina aza, dia tokony handinika ny fialana amin'ny doka. Ny fikarohana natao tamin'ny fiterahana bevohoka dia manamafy fa ny antony mahatonga ny steroid dia miteraka fahasembanana eo amin'ny lahy sy vavy, ny fanavakavahana amin'ny foetus, ary ny tsy fahampian-tsakafo hafa.
Ho an'ny ankizy sy ny tanora, ny fampiasana methyl test dia mety hanelingelina ny fivoaran'ny taolana.
Ireo vondrona hafa izay tokony hanalavitra ny steroid dia ny mararin'ny homamiadana, ny olona manana toe-po, ary ireo izay manana aretina azo avy amin'ny ra. Na dia manana tantara amin'ny fitantanana sy fitsaboana ny kanseran'ny nono aza izy, dia tsara ny manana dokotera dokotera.
Eny, raha mpilalao matihanina ianao dia mety ho ny steroid ihany no hany safidy hanatsarana ny asanao sy hampitomboanao ny herinao. Na izany aza, tokony hijery ianao satria ny fikambanan'ny atletisma dia hihaza anao. Tsy isalasalana fa hanaparitaka ny rakitsoratra manerantany ianao, saingy hanaisotra ny medaly ny manampahefana ary handrara anao tsy handray anjara amin'ny atleta.
Ny sikina methyltestosterone mahazatra dia maharitra hatramin'ny enina ka hatramin'ny valo herinandro. Ny dosage tsara indrindra dia ny 40 - 50mg. Na izany aza, tsy midika izany fa ny lanjany eto ambany dia mbola hitondra vokatra. Ny mifanohitra amin'izany kosa, dia ho hitanao ny fanatsarana vitsivitsy miaraka amin'ny voka-dratsiny kely.
Raha toa ianao ka mampiasa ny endrika buccal dia ataovy izay hampihenana ny dosage hatramin'ny 50%. Tsy maintsy tapahina ny dosie satria io fomba fitsaboana io dia manana fari-pahaizana ambony kokoa raha oharina amin'ny endrika am-bava.
Any amin'ny faran'ny methyltestosterone tsingerin'ny, mety hitera-doza ny famokarana hormonina testosterone. Amin'ity tranga ity, midira amin'ny fitsaboana post cycle mba hihazonana ny lanjany.
Noho ny halavitrana fohy, ny methyltestosterone dia hahatratra ny tampony ary miditra ao amin'ny rà mandritra ny adiny iray. Raha misy mpanazatra mazoto maka ny steroid vao haingana alohan'ny fifaninanana, dia hanana hery fara-tampony, herisetra, ary hery izy mba hifaninana.
ao amin'ny methyltestosterone bulking dingana, miova tsikelikely ny fanovana ary tsy dia mahamarika loatra. Raha tsy manao pisan-pototra ianao, dia mety tsy hahazo ny hozatry ny hozatry ny hozatra izay nofinofinao ianao.
Ny antsasaky ny fiainana methyltestosterone dia ao anatin'ny 2.5 ka hatramin'ny 3.5 ora. Amin'ny ankapobeny, manodidina ny ora 3.
The Time Detection
Aorian'ny dose farany, methyltestosterone sy ny metabolites dia hijanona ao amin'ny vatana mandritry ny herinandro alohan'ny fanafoanana tanteraka. Ao anatin'ny fandaharam-potoana, hatramin'ny 90% azy dia ho hita ao anaty pipa fa ny sisa kosa dia hiseho amin'ny fefy.
Amin'ny fampivoarana ny teknôlôjia dia mbola hitanao ny tsiranoka amin'ny tsiranoka amin'ny herinandro efatra na enina herinandro aorian'ny fampiatoana. Na izany aza, io fahafaha-manao io dia miankina amin'ny hoe nahatonga ilay mpampiasa handrotsa-doko na phenobarbital mba hampihena ny fandroahana ny fatran'ny methyl.
6. Methyltestosterone ho an'ny fanonganana
Ho an'ireo izay eo amin'ny famaranana, ny fampidirana methyltestosterone ao amin'ny fitondranao dia tsy isalasalana fa hitondra vokatra tsara. Ny steroid dia manana fiantraikany ratsy amin'ny anabolic. Noho izany, ny tombony mavesatra dia tsy voamarika loatra ary tsy hay hadinoina izany.
Raha ny zava-misy, ny fahitana mavesatra dia miteraka foana noho ny fisorohana ny rano. Any amin'ny faran'ny taom-pamokarana methyltestosterone, dia hisy ny fiheverana ho an'ny rano raha ny mpampiasa dia manoratra ny fahaverezan'ny lanjan'ny vatana.
7. Methyltestosterone ho an'ny Bulking
Methyltestosterone ho an'ny tombom-barotra Tsy afaka hanome anao ny tanjaky ny hozatra lavorary nanananao ianao. Amin'ny ankapobeny, ny habetsaky ny vola azonao dia noho ny fisotroan-drivotra ambony sy ny lanjan'ny rano manaraka. Rehefa vita ny fizotran'ny tsingerina dia miantoka ny fandehanana manaraka ny fitsaboana amin'ny alina mba hihazonana io vatana io.
Mba ho azo antoka, andramo ny fanafody steroid. Ampiasao ao anatin'ilay dingana lehibe ny zava-mahadomelina toy ny Dianabol, Decanoate, na Trenbolone.
8. Ny tombontsoa methyltestosterone
1) Mitombo ny fahombiazany
Ny fihetsika mahery fihetsika amin'ny alàlan'ny fanakanana ny asan'ny kibo ary ny fampiroboroboana anabolisma. Ity hetsika ity dia mampitombo ny fahaiza-manao, manatsara ny hery ankapobeny ary manatsara ny psyche. Ho an'ny mpanao birdera, mpamono olona, ​​ary mpanao fanatanjahan-tena mavitrika, ireo tombony methyltestosterone ireo dia fanampiny. Ny mpampiasa dia mahazo fampiofanana matanjaka amin'ny hery sy hery lehibe maro tsy misy reraka.
2) Mitombo ny herisetra
Te-ho ilay lehilahy henjana ve ianao any amin'ny manodidina? Eny, hanao methyltestosterone. Ny mpandray anjara rehetra amin'ny fanatanjahan-tsambo dia haniry ny hisafidy ny herisetra, ny tanjaka, ary hifantoka mandritra ny lalao.
3) Mitombo ny lanjan'ny muscle
Na dia mety tsy mahazo vatom-panafody be loatra aza ianao, dia mbola afaka mitsabo ny zava-mahadomelina hanomboka hanomboka anao methyltestosterone bulking tsingerin'ny. Tokony hojerenao fa ny fitomboan'ny vatana dia foana noho ny lanjan'ny rano rehefa aromina ny hormonina.
Miaraka amin'ny methyltestosterone dia hahatsapa ny fiantraikan'ny zava-mahadomelina ianao, fa tsy mihoatra ny adiny iray aorian'izany. Ny fiovana dia hita mibaribary ao anatin'ny fotoana fohy amin'ny fotoana iray noho ny antony iray. Ny halatra an-kibo no lany amin'ny steroid. Noho izany dia hahatratra ny tendrony izy amin'ny isa telo.
Ny fisian'ny methyl group ao amin'ny rafitr'ireo methyltestosterone dia mampitombo ny fitiavany mivadika amin'ny lanjany eo anelanelan'ny enina sy valo ora. Raha mbola mitazona ny faran'izay tsara indrindra amin'ny rongony ianao ao amin'ny rà, dia hahatratra tanjaka tsara sy mahavariana ianao.
Ny fitsaboana dia mijanona ela kokoa eo amin'ny vatanao rehefa mandray izany amin'ny alàlan'ny buccal administration ianao raha tsy mitandrina ny tablette. Ity trano ity dia mitranga satria miditra amin'ny rafi-pandehanana mivantana amin'ny alàlan'ny fitsaboana tsy misy mandalo amin'ny aty.
6) Manatsara ny Level Testosterone
Raha ambany ny famokarana voajanahary amin'ny testosterone, dia tsara foana ny ampiasaina methyltestosterone. Ny zava-mahadomelina dia mahasoa ny lahy sy ny homogonadista voalohany sy voalohany, toy ny tsy fahombiazan'ny testicular sy ny tsy fahampian'ny hormones gonadotropine (GnRH). Ny toe-javatra hafa dia misy ny fihanaky ny aretina hypothalamique, ny fitsapana tsy hita maso, ary ny tsy fisian'ny endogenous endogenous androogens.
Rehefa mieritreritra fa hormonina testosterone izy io, dia hanao toy izany koa ny methyltestosterone ary mampirisika ny lahy hanao firaisana amin'ny lahy.
Ny tetikadin'ny methyl dia tsy misy vokany, angamba noho ny fihenan-tsakafo anabolika ho an'ny androgenic activities. Ireto misy vaovao tsara vitsivitsy. Rehefa azonao atao ny mametraka azy amin'ny steroids mahery hafa, dia ny fahatsapanao fa hitsiky amin'ny fitaratra ianao.
Ohatra, raha toa ianao ka eo amin'ny tsingerim-bolana, dia hampiaraka ny methyltestosterone miaraka amin'i Dianabol, Nandrolone, Trenbolone, na Decanoate. Amin'ny lafiny iray, ity steroid ity dia haka tsara amin'ny stanozolol raha toa ka izay rehetra tianao no hameno ny herinao.
8) fitsaboana tratry ny aretin-kibo
Ny methyltestosterone dia nahitana fahombiazana amin'ny fitantanana ny kanseran'ny nono izay efa niparitaka tamin'ny vatana hafa tao amin'ny vehivavy. Satria ity karazana fivontosana ity dia hormonal-fahamendrehana, hiverina izy io. Ny carcinoma hafa miankina amin'ireny rafitra ireny dia endometrioma, lexemia, lymphoma, ary homamiadan'ny prostate.
Ankoatra izany, mampitaintaina ny fanaintainana ny marary. Ny fahasamihafana lehibe indrindra eo amin'ny fitsaboana sy ny fitsaboana test
9) Mitarika ny soritr'aretin'ny menopause
Ny fanombohan'ny menopause dia miteraka tsiranoka kely amin'ny vehivavy. Ny fihenan'ny hormone dia tompon'andraikitra amin'ny fikolokoloana ara-pihetseham-po, ny fihenan'ny libido, ny tselatra ary ny soritr'aretina mifandraika amin'izany.
Ny fandinihana dia mampiseho fa mahomby ny fitondrana ny toe-pahasalaman'ny postmenopausal amin'ny Methyl Test. Ao amin'ny tsindrin-tsakafo, ny vehivavy dia afaka mihinana tsindrin-tsakafo ambany tsy misy fiantraikany ratsy.
10) Fanaraha-maso ny Fahamendrehan'ny Fahafatesana
Raha ny fiandohan'ny fanombohan'ny taonan'ny fahamaotiana, ny methyltestosterone dia mety ho ny safidy tsara ihany amin'ny fanentanana ny toetra maha-lahy na maha-vavy. Ity dingana ity dia mihatra rehefa tsy mandray tsara ny fitsaboana ara-tsaina ny niharan-doza.
Ny dokotera dia manolotra foana ny zava-mahadomelina mandritra ny enim-bolana.
11) Hormonina Olomasin'ny Testosterone
Na dia artificial sy 100% artificial, ny methyltestosterone dia modely madio amin'ny androgen lahy. Ny fihetsika ataony dia mifanaraka amin'ny an'ny testosterone. Raiso, ohatra; Ny medikaly dia hifanerasera amin'ny sela receptor raha tsy mahatsapa ny vatana fa ny hormone dia vahiny. Mifanohitra, ny fitsapana methyl dia ho toy ny endogenous androgen.
Mihoatra ny 90% amin'ny fanadihadiana methyltestosterone no manamarina fa mahomby ny steroid. Ho an'ny mpanao biriky, ny voalohany dia hiaina ny fitomboan'ny herisetra sy ny tanjaka. Etsy ankilany, ireo marary manana hypogonadism sy ambany ny testosterone ambany dia nitatitra fanatsarana lehibe.
Ny 100% amin'ireo mpampiasa rehetra dia nanaiky fa mora ny fampiasana sy fitantanana ny methyltestosterone. Tsy misy dika sarotra na injections mandratra. Ankoatra izany, ny fitsaboana ny zava-mahadomelina indray mandeha isanandro dia mampiavaka ny maro izay manadino ny fanoloran-tenany noho ny fanoloran-tena isan-karazany.
Taorian'ny dingana feno, afa-tsy ny antsasaky ny mpampiasa methyltestosterone no afa-po. Ny olona izay nisafidy ny hampiato ny zava-mahadomelina dia nanana antony roa lehibe. Ohatra, tsy dia fantatry ny olona ny fitantanana ny fiantraikany eo anoloany. Noho izany, ny fiantraikany ratsy dia nihoatra noho ny tombontsoa methyltestosterone. Faharoa, ny sasany dia nihevitra fa ny steroïda hafa dia tsara kokoa noho ny methyltestosterone.
Miorina amin'ny methyltestosterone revirevy, saika ny mpampiasa rehetra no niaina ny tsy fisian'ny zava-mahadomelina. Ny tsiambaratelo azo antoka amin'ny fitsaboana ny vokatra hafa dia ny fihinanana tsiranoka kely, ny fampiasana fotoana fohy, ary ny fanaovana faribolana fohy. Ny sasany amin'izy ireo dia misy;
Tavy hoditra sy akne
Mihabetsaka ny volony
Clitoris lava be
Fanohanana ny testosteron
Ny fahasimban'ny tosi-drà
Ny vokatry ny methyltestosterone Mialà indray mandeha tsy tapaka. Na izany aza, mety hanaraka anao any amin'ny fasanao ny fanilihana amin'ny vehivavy.
Ahoana no fomba hanalavirana ny methyltestosterone
Maka dòz ambany amin'ny kôdôdidia rehefa mamaritra ny halavan'ny bisikileta hatramin'ny fito herinandro mba hialana amin'ny aty
Mitondrà methyltestosterone eo akaikin'ny fitaovan'ny 5α-reductase toy ny finasteride, dipoasidida, na fitovozana mitovy amin'izany, izay hanafoana ny vokatry ny dihydrotestosterone.
Raha vao miova ao amin'ny DHT ny zava-mahadomelina dia miteraka olana amin'ny prostate sy ny fahaverezan'ny volony izany.
Ampiasao ireo tsindrona aromatase toy ny Tamoxifen, Nolvadex, na Arimidex mba hanoherana ny voka-dratsin'ny estrogenic
Atsaharo ny doka raha vao tsapanao fa misy vokany ratsy
Ampiasao ny aretina toy ny Liv-52 na ny Fibebahan'ny Liver mba hiarovana ny taova amin'ny fahavoazana mety
Mba hampihenana ny kisendrasendra no hametrahana programa fanatanjahan-tena mivaingana rehefa misoroka tondra-dronono, kôbio-hydrates, ary kolesterola. Ankoatr'izay, azonao ampidirina amin'ny sakafo trondro miaraka amin'ny menaka trondro sy ny antioxidant.
Rehefa vita ny tsingerina, tokony hanatanteraka ny protocol PCT ianao mba hanombohana ny famokarana hormonina testosterone endogenous.
Mandehana ao anaty rano be alohan'ny hisotroana alikaola
Koa satria ny fampiasana methyl test dia tsy feno ara-dalàna, dia mety tsy ho latsaka amin'ny vokatra hosoka ianao. Raha manana ordinatera ara-dalàna avy amin'ny dokotera ianao, ny fahazoana ny steroid dia mora toy ny fividianana kiraro roa. Azonao atao koa Mividiana môtera methyltestosterone na hividianana safidy vonona amin'ny fampiasana fikarohana, tanjona kilaometatra, na fampiharana ara-pahasalamana.
Raha toa ka tsy manana toro-hevitra amin'ny dokotera ianao, ny hany safidy dia ny hianjady amin'ny tsena mainty sy laboratoara ambanin'ny tany. Eny, tsy ny rehetra no anton'izany! Azonao atao ny mividy fivarotana virtoaly toy ny Buyaas ho an'ny kalitao sy ny steroids mety.
Ho an'ny tranombarotra an-tserasera, methyltestosterone for sale dia mora kokoa, azo itokisana, ary afaka mampitaha ny vidiny eo amin'ny mpivarotra samihafa.
11. Methyltestosterone vs Testosterone ho an'ny bodybuilding
Ny methyltestosterone dia ampongabendanitra miafina, izay mitovy amin'ny testosterone endogenous. Na dia teo aza ny artista teo aloha, dia samy manana fomba fiasa tahaka izany ny roa amin'izy ireo raha oharina amin'ny vatana izay tsy afaka milaza ny fahasamihafana. Ankoatra ny testosterone voajanahary, misy modely hafa toy ny Test Propionate na Cypionate, miasa toy izany koa.
Ny methyltest dia manana bio-disponibilite am-bava raha oharina amin'ny testosterone noho ny fanampian'ny vondrona mile ao amin'ny rafitra. Na izany aza, ny steroïde dia afaka miatrika ny fahanteran'ny taonan'ny fahanterana, ny hogogonadisma, ny fanaintainan'ny tazomoka manaraka ny tazomoka sy ny kôlejy, ny homamiadana, ary ny hozatra tsy voatanisa.
Izy ireo dia anisan'ny tarika amin'ny steroids anabolic-androgenic
Mampitombo ny fahaizan'izy ireo, ny tanjaka ary ny hozatra amin'ny bakteria, ny mpanao fanatanjahan-tena, ary ny mpanao herim-batana
Manana fampiharana ara-pahasalamana izy ireo amin'ny fitsaboana ny hypogonadism sy ny taha ambany amin'ny testosterone
Ny antsasaky ny fiainana
Vidiny isam-bolana Mihabetsaka kokoa raha tsy mividy methyltestosterone amin'ny ankapobeny Ambany
Fomba fitantanana Oral, buccal, ary sublingual Azo alaina tahaka ny gel ary ny vahaolana transdermal
Fankatoavana ara-dalàna 1972 1953
Structure Misy vondrona methyl iray ao amin'ny 17th toerana misy ny atôma karbôna Tsy misy methyl ao amin'ny rafitra
Ny methyltestosterone dia anisan'ireo steroids androgens vitsivitsy miaraka amin'ny vokatra ara-pahasalamana sy fambolena. Farafahakeliny, mora sy azo atokisana ny zava-mahadomelina satria ny fanjakana sasany dia manana zo hampiasa ny fampiasana amin'ny klioba.
Na dia tsy manome antoka anao ny fiarovan-tena tanteraka aza ny lahatsoratra amin'ny fampiasana fitsapana methyl, dia manome anao ny ampahany amin'ny zavatra andrasana rehefa mandray izany. Raha miorina amin'ny fampahalalana ianao, dia afaka mandanjalanja ireo loza mety hitranga sy handanjana azy ireo amin'ny tombontsoa. Raha sarobidy izany, dia tsara ianao buy methyltestosterone -tserasera.
Ny zava-mahadomelina rehetra dia manana fiantraikany. Noho izany, ny hany tsiambaratelon'ny fankafizana ny vokatra dia ny fitantanana ireo fiovana ireo. Raha efa namaky ilay lahatsoratra ianao, dia ho azonao ny vitsivitsy.
Mitady fifanarahana ve ianao? Jereo amin'ny mpamokatra methyltestosterone azo antoka toy ny Buyaas.